Dowladda Somaaliya oo ka hadashay Cambareyn uga timid Imaraadka – Radio Daljir
Abriil 11, 2018 3:36 g 1
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada amnigu ee Soomaalidu ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa isla markaana ay kala wareegeen $9 milyan iyo 600 kun oo dollar, waxayna ku tilmaantay tallaabadaasi mid sharci-darro ah oo xadgudub ku ah shuruucda caalamka.
Imaaraadka ayaa sheegay inay arrintaasi jebinaysay is-afgarad ay horey u gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka sannadkii 2014-ka.
Hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa difaacday tallaabada ay qaadday waxayna sheegtay in safiirka imaaraadka ee Muqdishu uu diiday in boorsooyinkaas la mariyo qalabka baadhitaanka iyaga oo aan la furin.
Dhanka kale, Sarkaal u hadlay Dowladda Federaalka Somalia ayaa xusay in boorsooyinku aan ahayn in loo adeegsado ujeedooyin dublamaasiyadeed, taasoo meesha ka saaraysa xasaanaddii ay cahdiga Vienna ee xiriirka dublamaasiyadeed.
Waxaa kaloo uu sarkaalku sheegay in is-agaradka ay gaadheen Soomaaliya iyo imaaraadka uu waaqtigiisii dhammaaday sannadkii 2016-kii. Iyadoo aan weli la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto lacagtii lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho oo lagu wareejiyay bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Ajaanib ugaarsanaysa Duurjoogta, oo degmadda EYL lagu arkay (dhegayso)
imaaradka : xishmad buu inooga baahan yahay Mar haduu ciidamadeedii kuu tababaray Mushaharna kuu siiyay Adiguna aad hurudo hoteel Qabow raaxaysanayso lacagtuu u soo diro ciidamada aad rabto inaad jeebka ku shubuto aduunku wuu ogsoon yahay soomaalina way daawanaysaa Hunguriga idinku jira ( Aduunka priority one waa ciidanka) idinku one month ciidanka difaaca qaranka soomaaliyeed MUSHAHAR MA siin kartaan waxaadna rabtaan inuu difaaco QARANKA wixii la siiyana inaad jeebka ku shubataan iyaguna halkaa ay ku waayan Xuquuqdooda Marka ciidan AMISOM idin Noqon Mayso